Amisom oo ka hadashay askari Nabad Sugid ah oo ay dileen. – Hornafrik Media Network
Amisom oo ka hadashay askari Nabad Sugid ah oo ay dileen.
By HornAfrik	 On Feb 25, 2018
Muqdisho-Hornafrik-Taliska Ciidamada AMISOM ayaa war kasoo saaray dilkii habeen hore ay Magaalada Muqdisho ugu geystay Askari ka tirsanaa ciidamada Hay’adda Nabad Suggida Soomaaliya oo ku sugnaa Barkontorool.
Falka dilka ah ayaa waxaa geystay ciidamada dowladda Uganda ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Gen Paul Lokech oo ah Taliyaha ciidamada Uganda ee ku sugan Soomaaliya ayaa sheegay in falka dilka ah uu dhacay markii ay loo diiday in maraan wadada, islamarkaana ay waceen taliyeyaasha Hay’adda Nabad suggida ee halkaasi heystay.
Kolonyo ka tirsan Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa isku dayay in ay maraan barta Kontorool oo ku taalla wadada aada Garoonka Diyaaradaha gaar ahaan halka loo yaqaano Biyo dageenka, waxaana is hor istaag ku sameeyay Askari ka tirsan Ciidamada Nabadsuggida Soomaaliya.
Laamaha ammaanka Dowladda Federaalka weli kama aanay hadlin falkan ku gardarooshada ah ee ay geysteen Ciidamada AMISOM, sida la ogson yahay AMISOM waa u caado iyo dhaqan in ay dil bareer ah u geystaan dadka shacabka ah.
Dowlada Turkiga oo cambaareysay Qaraxyadi Muqdisho Ka Dhacay.
Re’iisul wasaare Kheyre oo ku wajahan Imaaraatka Carabta.